Dhaqtar Ajnabi oo Muqdisho ku Geeriyooday - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Dhaqtar Ajnabi oo Muqdisho ku Geeriyooday
January 25, 2019 January 25, 2019 Cali Yare648
Waxaa Magalada Muqdiso ku geeriyooday Dr. Muhanad Cali Axmed oo oo dhalashadiisu tahay dalka Siiriya,kaas oo dhawaan uu dhaawac culus kasoo gaaray qarax loogu xiray gaari uu saarnaa degmada Hodan ee Gobolkan Banaadir.
Qaraxa uu dhaawaca kasoo gaaray Dr. Muhanad Cali Axmed ayaa dhacay 21-kii bishan,waxaana uu ka mid ahaa dhaqaatiirta Ajaanibta ah ee ka howlgasha Isbitaalka Muqdisho City Hospital ee Magalada Muqdisho.
Dhakhaatiirtan ayaa xiliga la beegsanayay waxa ay ka yimaadeen garoon ay ku soo ciyaareen Kubbada Cagta, kaas oo ku yaalla meel aan ka fogeyn Isbitaalka,sida xilliga qaraxa uu dhacay ay Dalsan u sheegeen qaar ka mid ah howl-wadeena Isbitaalka Muqdisho City.
Labadii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa waxaa lagu baxnaaninayay Isbitaalka Digfeer ee Magalada Muqdisho,waxaana la sheegay in lug iyo Gacan uu ka gooyay dhaawaca kasoo gaaray qarixii,hayeeshee ugu dambeyn uu Caawa u geeriyooday.
Waxaa jirtay dhaqaatiir kale oo kala ah mid siiriyiin iyo mid soomaali ah oo qaraxaasi uu dhaawac kasoo gaaray,hayeeshee saraakiisha Caafimaadka Isbitaalka ay sheegeen in xaaladooda ay tahay mid wanaagsan,isla markanaa la daweynayo.
Warar aan helnay ayaa waxa ay sheegayaan in Dr. Muhanad Cali Axmed ee Caawa geeriyooday uu mudo Sanad ah ka howlgeliyay Isbitaalka Muqdihso City ee Magalada Muqdisho,isla markaana uu qaabilsanaa cudurada Cunaha, Sanka iyo Afka (E.N.T).
Si kastaba ilaa iyo hadda majirto cid sheegatay inay ka dambeysay qaraxa lagu weeraray dhaqatiirtaas u dhashay dalka Siiriya ee ka tirsan Isbitaalka Isbitaalka Muqdisho City oo Caawa mid ka mid ah uu u geeriyooday qarax horay loogu dhaawacay.